FCA amin'ny mpampindram-bola: Jereo ny dianao | | Robots sy famantarana forex automated
Home » Vaovao sy hevitra momba ny vola »FCA amin'ny mpampindram-bola: Jereo ny dinganao
FCA amin'ny mpampindram-bola: Jereo ny dinganao
25.05.2020 Admin 0 Vaovao sy hevitra momba ny vola,
Ny tompon'andraikitra ara-bola (FCA) dia niditra tamin'ny iray amin'ireo fiangonam-potoana fanaon'izy ireo momba ny fomba ahafahan'ny banky miasa amin'ny orinasam-barotra amin'ny mpanjifan'ny orinasa.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia manelingelina ny momba ny fanomezana ny fahazoan-dalàna mizaka ny vola nanomboka teo ny krizim-pandezana nohazona, ary indrindra raha nahalala mazava tsara izy ireo tamin'ny fanomezana alalana.
Ampy izay ny nanoratra azy taratasim-panjakana "Ry malala" tamin'ny faramparan'ny volana aprily izay nahatsikaritra ny banky fa mijery ny olana izany.
Mampahery ny mihevitra ny indostria mety hahita izany ho ohatra iray hafa amin'ny mpanondrana iray mamaritra ny fomba fitantanana ny orinasa, sahala amin'ny fanesoana nataon'ny tatitry ny FCA 2016 tamin'ny banky varotra bizina, tamin'ny alàlan'ny fizarana maro - miaraka amin'ireo fanambarana tsy manam-pofohazana izay ankasitrahan'ny banky indraindray. mpanjifa sasany manoloana ireo mpanjifa hafa amin'ny fiatrehana, na koa (lasantsy!) dia nampiasa latabatra làlan'ny ligy hamoronana orinasa.
Ny taratasiny farany dia azo antoka fa manana an'io.
Ny FCA dia toa miahiahy amin'ny "tatitra" izay naheno azy fa "ny banky dia mety hampiasa ny fifandraisany amin'ny mpampindram-bola mba hanerena ny mpanjifan'ny orinasam-panjakana mba hahazoana antoka amin'ny andraikitra ara-drariny fa tsy hanendrena azy ireo ny mpamoaka azy".
Nanohy io: "Amin'ny toe-javatra sasany, ireo andraikitra ireo dia mety 'amin'ny anarana ihany', ary misy serivisy hafa na omena ho takalon'ny sombin-tsofina."
Ny fika mivaingana momba ny fampindramam-bola amin'ny serivisy hafa dia efa ela dia voarara any Etazonia, ary ny fahazoan-dàlana miparitaka any an-kafa dia tsy tokony hatao izany.
Saingy tsy takatry ny saina fa ny fampindramam-bola sy ny fifanarahana ara-bola dia horesahina ho ampahany amin'ny fomba famatsiam-bola amin'ny banky izay afaka manampy amin'ny roa tonta, indrindra amin'ny krizy.
Ary raha izany no izy, dia toa tsy ho vita ny orinasa hanendry izay mpampindram-bola amin'ny fifanakalozana ara-bola, na dia tsy nampiasa izany teo aloha aza. Ara-dalàna ny fahitana ny tombontsoa amin'ny fidirana ifanomezana amin'izao fotoana izao.
Hodinihintsika bebe kokoa io, fa irinay ny hanajanonana ny fampiharana an'io toetra io
- Financial Fitondran-tena Authority
Ny iray koa dia mihevitra fa ny zotom-pon'ny FCA hampiroborobo ny fifaninanana dia tsy voafetra ho an-tsokosoko orinasa firy kely izay mety hahita ny modely ara-barotra aminy raha toa ka maniry mafy ny fampindramam-bola ny mpanjifany ary vonona ny hanaparitaka ny orinasan'izy ireo manodidina - na hitondra azy any an-toeran-kafa - raha mieritreritra izy ireo dia hahazo safidy tsara kokoa noho izany.
Ary, mibitsaha azy mangingina, na dia ny banky lehibe aza dia avela hiditra amin'ny sehatry ny asa vaovao ary hiara-miasa amin'ny mpanjifa vaovao.
Tsy adala koa ny mpampisambotra. Fantatr'izy ireo fa ny banky dia tsy maintsy manome vidiny ny fanomezana ny fifandanjana amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fijerena ny fiverenan'ny sheet sheet.
Ny FCA dia hamahana ny asany amin'ny fanombanana raha nahazo alalana ny nomena azy noho ny fanerena tsy eken'ny mpampindram-bola na noho ny orinasa iray mahatakatra ny toekarena fototra.
Raha toa ka nahitana fangatahana mazava amin'ny fanendrena ho an'ny orinasa hafa ny fampindramam-bola, dia mazava fa misy raharaha hamaliana ny banky ary tokony hatao. Ao amin'ny taratasiny, dia nilaza tamin'ny banky ny FCA fa hanao fisavana tampoka mba hahitana raha tafasaraka ny sisin'ny tsipika iray izy ireo.
Tsy mora izany, ary tsy ho mora amin'ny mpanondrana iray manohitra izay mety ho azony. Na dia eo aza ny làlan'ny mailaka sy mpandika basy mifoka sigara, sarotra ny FCA hampiseho fa nisy zava-nitranga tsy niseho.
Izany rehetra izany ve farafaharatsiny dia midika fa mety misy faritra fotsy volo? Ny banky zokiolona iray ao amin'ny andrim-panjakana UK dia tsy mieritreritra izany mihitsy, indrindra satria ny orinasa dia tsy maintsy mieritreritra ny toerany ankapobeny mihoatra noho ny taloha.
"Tsy misy fitovizany mazava eo amin'ny fitenenana fa homeko trosa ianao fa raha avelanao hitarika ny fitadiavam-bola arahin'asa ianao, ary etsy an-kilany dia milaza fa raha te-hampitombo fitovian-karena ianao, dia mila trosa amin'ny banky mba hahomby. Ary ny mpandrindra no mahazo izany. ”
Ny FCA dia tsy nametraka andrim-panjakana ary tsy naneho porofo momba ny tsy mety nataon'ny banky manokana. Saingy ny FCA dia nahatsapa mazava tsara fa ny filaharana amin'ny tsena rehetra dia milamina.
"Hijery bebe kokoa an'io isika, fa irinay ny hanajanonana ny fomba fanao toy izao," hoy izy nanoratra.
Ny fahombiazan'ny ECM
Na izany rehetra izany dia mbola ho hita eo. Ny tsy azo isalasalana ihany anefa dia ny orinasa sasany no nanamarika ny fahombiazana lehibe tao amin'ny tsenan'ny orinasan'ny UK (ECM) nanomboka ny 1 martsa.
Ary na dia tsy misy mipetraka ao aza izay mety hiantso ny fanjanahana ECM nentin-drazana nentin-drazana, dia nanangana orinasan'ny ECM sy asa lehibe any UK izy ireo. Tsy misy na iray aza mijery hafahafa amin'ny fidirany amin'ny fifanakalozana ECM.
Amin'ireo renivohitra efatra izay notahirizin'i Barclays, ny telo dia ho an'ny orinasa izay tsy nitarika ny fifanarahana ECM taloha. Tantara mitovy amin'izany ao amin'ny HSBC, izay ny fifampiraharahany dimy dia misy ny fe-potoana mandoa ECM voalohany. Ary amin'ny BNP Paribas, izay efa an-taonany maro izao dia misaintsaina ny hanangana ny frankey any UK amin'ny vokatra bebe kokoa, ny fitomboan'ny renivohitra efatra dia ho an'ny mpanjifan'ny ECM vaovao.
Lehibe santionany kely, fa nandritra ny vanim-potoana hatramin'ny 1 martsa Barclays dia teo amin'ny laharana fahadimy ho an'ny UKM UK rehetra, ny toerany izay notanana tamin'ny taona 2019. Fa ny laharana HSBC fahefatra, raha oharina tamin'ny faha-13 tamin'ny taona 2019, raha nitsambikina kosa i BNP Paribas fahavalo taona faha-14.
Mety ho mampientanentana kokoa noho ny mety ho tian'ireo teorista mpiray tsikombakomba, fa ny fehin-kevitra manintona amin'ny fandresena mandatsa-bato dia mety ho ny krizy manome fotoana mety tsara ho an'ny banky hanao marika amin'ny mpanjifa vaovao.
Ny mahaliana kokoa dia ny hoe afaka mitazona azy ireo izy ireo rehefa mitoetra ny vovoka.
Previous: Mipoitra ny rahona EURAUD Ery ambany Ichimoku Cloud
Next: Miorina amin'ny fihetseham-po raha toa ka miankavia ny tsenan'ireo Hong Kong any Hong Kong, nampionona ny fanoloran'ny PBoC